Zvinyorwa zvaMichael Peggs pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Michael Peggs
Michael Peggs ndiye muvambi we Marccx Midhiya, yedhijitari yekushambadzira agency inoshandisa SEO uye Zvemukati Kushambadzira. Pamberi paMarcxx, Peggs akashanda paGoogle mukuvandudza bhizinesi, achigadzira midhiya enhau uye kushambadzira kudyidzana. Iye zvakare blogger uye podcaster, inobata iyo iTunes Top 10 Nyowani & Inokosha Podcast Iwe Yunivhesiti.
Inobudirira Sei Kurarama Kurarama Kune Wako Brand?
China, Gunyana 1, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Michael Peggs
Sezvo vezvenhau vachienderera mberi vachiputika, makambani ari kutsvagurudza kutsvaga nzira nyowani dzekugovana zvemukati. Munguva yakapfuura, mazhinji mabhizinesi akanamira kublogi pawebhusaiti yavo, izvo zvaive nemusoro: Zvakaitika kare ndidzo dzakachipa, dziri nyore, uye nzira dzinoshanda nguva-zhinji dzekuzivisa ruzivo. Uye kunyangwe kugona kugona iro rakanyorwa kunoramba kuchikosha, zvidzidzo zviri kuratidza kuti kugadzirwa kwevhidhiyo zvemukati ndechimwe chigadzirwa chisina kubikwa. Kunyanya zvakanyanya, kugadzirwa kwe 'live